Rest of Myanmar | မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မှ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်အကိုင်များ | MyJobs
ဘဏ် ၊ ငွေကြေးလုပ်ငန်း နှင့် အာမခံလုပ်ငန်း
စာချုပ် ဖြင့်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အလုပ်အမျိုုးအစား
Rest of Myanmar ရှိ မှ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်အကိုင်များ
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်အကိုင်များ
Information Management Assistant ( UN )
To accurately enter data captured in the established Information Management Systema and provide data and information.
To accurately enter data captured in the established Information Management Systema and provide ...
Project Development Executive (Male - 1 Post) IGE Land Co., Ltd.
Dealing and negotiation with government authorities. Understanding about government authorities’ process Able to stay at Nay Pyi Taw
Dealing and negotiation with government authorities. Understanding about government authorities ...
Branch Manager Tatkon (နေပြည်တော်-တပ်ကုန်းမြို့နယ်)
Vithey Microfinance Myanmar
Branch Manager Tatkon (နေပြည်တော်-တပ်ကုန်းမြို့နယ်). This job is in Tatkon (Naypyitaw). Can you work in Tatkon?
Branch Manager Tatkon (နေပြည်တော်-တပ်ကုန်းမြို့နယ်). This job is in Tatkon (Naypyitaw). Can you ...
ရှိ ထိပ်တန်းကုမ္မဏီများမှ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်အကိုင်များ ကိုရှာဖွေလိုက်ပါ။ အွန်လိုင်းမှအလွယ်တကူလျှောက်ထားပြီး အလုပ်အသိပေးချက်များအတွက် စာရင်းသွင်းလိုက်ပါ။